China Express Service ọrụ na onye nnọchi anya | Sunson
Hipgbọ mmiri na akaụntụ awara awara nke gị dị oke ọnụ? Mgbe ahụ gịnị kpatara na ị gaghị ebubata olu anyị? Anyị na-enye ndị ahịa gosipụtara ọrụ dịka DHL, UPS na EMS na ọnụego mbelata. Mbupu ngwa ngwa na ọnụego akụ na ụba, ị kwesịrị iji ya.
DHL bu ulo oru nke Deutsche Post DHL, ndi ama ama ama ama na ama ama na uwa. Ọ kachasị gụnyere ngalaba azụmaahịa ndị a: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight and DHL Supply Chain. Na 1969, DHL mepere ụzọ mbufe izipu ozi mbụ ha site na San Francisco gaa Honolulu. Kemgbe ahụ, ọ gara n'ihu na-etolite na ọsọ dị ịtụnanya wee bụrụ onye ndu ahịa na ụlọ ọrụ nnyefe ahịa awara awara ụwa. Enwere ike izipu ya na mba 220 na mpaghara ụwa niile, na-ekpuchi ihe karịrị ebe 120,000 (mpaghara koodu koodu nzipu isi), ma nye ndị ozi na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa onwe ha. Ma ọ bụ dọkụmentị ma ọ bụ ngwugwu, ewepụtara ya n’otu ụbọchị, n’ime oge ma ọ bụ n’ime obere ụbọchị, DHL International Express nwere ike ịnye ọrụ ga-egbo mkpa gị. Ọnụahịa ahụ dị mma ma nnyefe ahụ bụ ngwa ngwa. Ọ bụ ọrụ ị na-ahụ maka mba ụwa ịchọrọ.
E hiwere UPS International Express na United States ma bụrụkwa ụlọ ọrụ nnyefe ngwugwu kachasị ukwuu n'ụwa. Okwadoro ya ikwado mmepe azụmaahịa ụwa. Ọ bụkwa onye na - eweta ndị njem njem, lọjistik, na ọrụ e-commerce, na-eje ozi karịa mba 220 na mpaghara, iji nye gị ọrụ dị elu na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ekewara ọrụ Fedex n'ime ụdị mkpa (IP) na ụdị akụ na ụba (IE), mkpa (IP) gosipụtara ọrụ: oge ​​nrụtụ aka 2-5 ụbọchị ọrụ, akụnụba (IE) gosipụtara ọrụ: oge ​​nrụaka 3-7 ụbọchị ọrụ, ọ bụ ụlọ ọrụ izipu awara awara nke ụwa, na-eje ozi ihe karịrị mba 220 na mpaghara ụwa niile. Ọ bụ ọrụ sara mbara, dị mma ma nwee ntụkwasị obi, ọsọ ọsọ, ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ nke awara awara. O adabara maka ibuga nnukwu uru, izipu oge na-ewe iwe, ma nye ọrụ awara awara na ntụkwasị obi.
EMS International Express (Worldwide Express Mail Service) bụ ọrụ nkwupụta ozuru mba ụwa nke UPU na-achịkwa. EMS kwuputara n'ahịa na-enwe ikike izizi ikike na ọkwa dị iche iche, kọstọm, ụgbọelu na ngalaba ndị ọzọ. Ọsọ ọsọ na nnyefe dị elu nke akwụkwọ ozi mberede mba ofesi, akwụkwọ, ụgwọ ego, ihe nnweta na akwụkwọ na ngwa ndị ọzọ na ndị ọrụ. EMS express express anaghị achọ mgbakwunye mmanụ ụgbọ ala ma nwee ike iru ebe 210 gburugburu ụwa. Ike awara awara awara awara awara ga-esi ike, yana ijikọ kọstọm dị na post.
Gosipụta Ọrụ Worldnyefe Worldwa